Umshini wokuhlanza (3) Ifektri - China Umshini wokuhlanza (3) Abenzi, abahlinzeki
10L / 15L Thulisa Uhlobo Umshini wokuhlanza - HT-10S / HT15S / 15J
Imbangela yamandla angaka, inkinga ebonakala kakhulu nge-vacuum cleaner umsindo, kepha indawo enkulu yomphakathi ayikwazi ukwamukela umsindo ovela kumshini wokuhlanza ngesikhathi sebhizinisi. I-HT-10S isihlanza sohlobo lokuthula, umzimba omncane ungahamba futhi ube lula kakhulu
20L / 32L / 45L Emanzi Dry Umshini wokuhlanza YJ1020 1032 1245
I-vacuum cleaner emanzi neyomile ifana ne-canister cleaner eyisisekelo, yakhelwe ukubhekana nokuchithwa kuketshezi njengesondo njengokungcola okomile nothuli. Yayisetshenziselwa ikakhulukazi imisebenzi esindayo, ikakhulukazi ezindaweni zokuhweba. Kodwa-ke, amamodeli amasha, ahlangene ngosayizi ohlukahlukene asanda kwaklanywa ngabakhiqizi ukuze basetshenziswe ekhaya.
I-15L / 32L / 45L Yokuhlanza Amanzi Amanzi BS-1020A 1032A 1245A
I-vacuum cleaner ngayinye iza nezinamathiselo eziningana. Okunamathiselwe ngakunye kunokusetshenziswa okuthile, futhi uhlobo lomsebenzi wokuhlanza osuzowenza kufanele lunqume okunamathiselwe ozokusebenzisa.
I-15L / 30L Yokuhlanza Okumanzi Nokomile H6001 H6002 H6003
I-vacuum cleaner ngayinye iza nezinamathiselo eziningana. Okunamathiselwe ngakunye kunokusetshenziswa okuthile, futhi uhlobo lomsebenzi wokuhlanza oyi-vacuum emanzi neyomile iyithuluzi elibaluleke kakhulu ngenxa yokusebenza kwaso okuningi nokusetshenziswa kwaso. Kuyathakazelisa ukuthi ayigcini nje ngokukwazi ukuhlanza imfucumfucu, isuse uthuli futhi imunce ukuchitheka ketshezi, kepha futhi inamandla okwenza imisebenzi eminingana njengale ebalwe ngezansi.
I-70L / 80L Yokuhlanza Okumanzi Nokomile H6004 H6005
Isihlungi sendwangu ngaphakathi sikuvumela ukuthi uhlanze i-vacuum kalula futhi singavikela i-vacuum ekulimaleni kothuli.
I-70L / 80L Yokuhlanza Okumanzi nokomile nge-squeegee H6006 H6007
Idizayini yombhobho wombhobho yenza umsebenzi wokuhlanza usebenze kahle futhi ube lula.
I-15L / 30L / 60L / 80L Yokuhlanza Okumanzi nokomile LC151, LC301, LC602S, LC 802S
Isihlanza samanzi esomile esimanzi ngokuvamile senzelwe ngendlela elula. Isebenzisa amasistimu amabhakede amabili asetshenziswa ekuhlukaniseni izinhlayiya eziwuketshezi kulezo eziqinile. I-cleaner ibuye ibe nechweba lokungenisa elimunca lonke udoti oluzohamba ngeshubhu kanye nokunye ukungcola okunconyiwe.
I-90L Yokuhlanza Emanzi Namanzi Eyomile H6015 H6016
Ithangi lepulasitiki elisobala, i-acidproof ne-anti-alkalis, nokumelana kwe-collishion.